Rita, Writing for My Sake!: စာရေးဖော် သူငယ်ချင်း
Posted by Rita at 5/12/2010 04:55:00 PM
ဘာမှ မဖြစ်ဘူး အကောင်းကြီး အလတ်ကြီး ပူမနေနဲ့ 
ဖတ်ပြီး ဘယ်သူ့ ကိုရည်ညွန်းရေးမှန်း မသိဘူး။
အဲလိုပဲ.. တခြားသူတွေ ဘလော့တွေမှာ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရည်ညွှန်းရေးကြတယ်ဆို ဘယ်သူ့ ကိုပြောနေမှန်း ကိုယ့်ဘာသာ ဖော်ရလေ့ မရှိတာ ကိုယ် ဘလော့တွေကို အတော်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် အဲလိုဖတ်လိုက်တာဟာ အပေါ်ယံလောက်ပဲဖတ်မိလို့ လားလို့ တောင် ထင်မိပါရဲ့။
ကျနော်ကတော့ သူ့ကို စာတွေ ဆက်ရေးစေချင်တယ်။
သူ အေးဆေးသွားရင် ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မရီတာ သူငယ်ချင်း စာရေးဖော်တွေကို ခုလို သတိတရ ရှိတာ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
ကိုယ်သိတယ် သူ့ကို ...း)
အိမ်ရောက်မှ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်မယ်။
စာရေးဖေါ်ဆိုတဲ့ ကြိုးထူထူတချောင်းကြောင့် ကိုယ်လဲ သူ့အတွက် အဲဒီလိုမျိုးလေး ရေးချင်နေတာပါ...
အခု ညီမက ကိုယ်ရေးချင်နေတဲ့ စာလုံးတွေ အတော်များများကို ရေးချပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေနပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်...။
ညီမရေးထားတာကို သူ ဖတ်မိခဲ့ရင်၊ ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ စာရေးဖေါ်တွေရဲ့ ကော်မန့်တွေကို ဖတ်မိခဲ့ရင် အရင်ကလို စာတွေ ပြန်မရေးဖြစ်တောင်မှ သူ့ကို အခုလို နားလည်ကြတဲ့ ချစ်ခင်ကြတဲ့ စာရေးဖေါ်တွေ ရှိနေပါလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ သူ ကျေနပ်သွားမှာ သေချာပါတယ်...။
ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ညီမရီတာကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်...။
တောက ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပြောတာဆိုရင် အစ်မဆင်ကလည်း သတိရနေပါတယ်...
သူဘာဖြစ်လို့ ဆက်မရေးဖြစ်တော့တာ သိချင်မိတယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာကများ သူ့ကို စာဆက်မရေးဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာပါ။
ထူးတော့ထူးဆန်းသား။ ကိုယ်ဘလော့မလုပ်ခင်ကတည်းက သူ့စာတွေကို ရင်းနှီးတယ်။
ကိုယ်တို့တွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆုံဖူးတယ်။ တရားစခန်းအတူဝင်ဖူးတယ်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို တစ်ဖွဲ့တည်းအနေနဲ့ အတူကြည့်ဖူးတယ်။ စာပေဟောပြောပွဲမှာ ဆုံဖူးတယ်။ အဲသည့်အထိ သူ့ကို ကိုယ်သတိမထားမိဘူး။ ဘလော့ဂါဘယ်သူဆိုတာ ကိုယ်မသိခဲ့ဘူး။
လူနဲ့နာမည်နဲ့ တွဲသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တစ်ခါမှကို မဆုံဖြစ်တော့ဘူး။
ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့ကို စာတွေ ဆက်ရေးစေချင်မိတယ်။ အမြဲတမ်းမဟုတ်ရင်တောင် စိတ်ကူးပေါ်တဲ့အခါလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
ဒီပို့စ်လေးရော၊ ကော်မန့်တွေပါ သူဖတ်မိရင် သိပ်ကောင်းမှာ။
ရီတာရေ မအယ်လည်း ခဏခဏ သတိရတယ်။
မြန်မာပြည်များ အပြီး ပြန်သွားလား
နှုတ်တော့ ဆက်သွား သား..။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိတာ တခုပဲ။
ဟင်...မသိဘူးတော့...အဲ သိတော့ နဲနဲ သိသလိုပဲ၊ ဟို အုံ့ပုန်းချစ် စာတွေရေးတဲ့ တယောက်လား...?
ငါးကြော်တိုင်း သတိရတယ်။ သူရေးထားတဲ့ကဗျာလေးကို သွားနောက်မိလို့လေ။
side bar လေး ကြည့်ချင်စိတ် ရှိအောင် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဟင်... မသိလို့ မေးတာပါ။
လူတော မတိုးတော့တဲ့ ရွာက အနူကြီးကို ပြောလိုက်ပါ။
ဓါတ်ပုံဆရာ သင့်ကို အလိုရှိသည်...
မှတ်ချက် ။ ကလေးအဖေ မဟုတ်ပါ။ ငှဲငှဲ...
I remember himmmmmmmmmmm.
Hay... coming back .
If u don't want to come back.
contact with mail.
we r siblings of engineer group.
သံယောဇဉ်ကအကိုရယ် အမရယ် မောင်ရယ် ညီမရယ်လို့ခံစားခင်မင်ရတော့လည်း.........
ဒေါ်ရီတာ့ သူငယ်ချင်း ကိုမသိပါ
ထင်တာတယောက်တော့ရှိသည် ထင်တယ်ဆိုတာကလဲ ထင်တာပါပဲလေ နော် သိတာမှမဟုတ်တာ အဲ့တော့ အဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာမရှိပါ
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ဒေါ်ရီတာ ကို စာတကယ် ရေးရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိတယ်
ဒေါ်ရီတာ က စာဘတ်နာတယ်
အဂတိ တော့ လျော့ရမယ်
ခုလောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပဲ ဝေဖန်အုံးမယ်
2008 ကုန်ခါနီးလောက် ကဆိုတော့ ဒို့တော့ မသိဘူး ဒါပေမဲ့ စာရေးဖော် သူငယ်ချင်း ကို သတိတရရှိတဲ့ ညီမ ကိုတော့ လေးစားပါတယ်
Some are never ever come back again.
They have gone the way their choice.
I would like to recommend you to see the movie "HACHIKO, A DOG'S STORY" if you haveatime.
A dog named HACHIKO! not Ritako.
This very special friend would accompany his master to the train station every day and return each afternoon to greet him.
Sadly his Master departs one day, pass away and never returns to the same.......
rita ရေးထားတာသိတ်ကောင်းတယ်.. ရီတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်အောက်မေ့တယ်။
မတွေ့တာ အတော်ကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် ညနေက တွေ့ခဲ့လို့ သတိတရ ကွန်မန့်လာရေးတာပါ။ ပြုံးလို့ရွှင်လို့ အတော်စိတ်ချမ်းသာနေပုံ ရပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ :D
အမပြောသလိုဘဲ သူ့ကိုစာတွေ ဆက်ရေးစေချင်ပါတယ်.... ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ ဘလော့လောကကို တကန့်စီထားချင်တဲ့ သူ့ကို မေလေး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေ မမေးခဲ့ဖူးသလို အခုစာမရေးချင်တဲ့ကိစ္စကိုလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး မမေးဘူး.. သူကိုအကို့ရင်းတစ်ယောက်လိုဘဲခင်မင်မိပါတယ်.. သူ့ကျမ်းမာစွာနဲ့စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေဆဲပါအမ...
သည်ပို့စ်မှာ သူ့ comment တွေ့လိုက်ရသေးတယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲဒါ recent အဖြစ်ဆုံးလို့ထင်တယ်။